Sida loola macaamilo xaalad adag lammaane ahaan: ka gudub kala taggii | Ragga Stylish
Way adagtahay in laga gudbo kala tag iyo maskaxdeena ka saar qof nolosheena kaqeyb qaatay muddo dheer. Waxay noqon doontaa hawl gaabis ah, laakiin macquul maahan.
Waxa ugu horreeya ee laga gudbo kala taggu waa maskaxda ku hayso inaad rabto inaad qofkaas ka saarto maskaxdaada iyo wadnaha.
1 Tilmaamaha maskaxda lagu hayo si looga adkaado kala tag
1.1 Iska ilaali cidlada
1.3 Ka bixi aaggaaga raaxada
1.4 Baro wax cusub
1.5 Ka fikir qabow
1.6 Raadi bilow cusub
Tilmaamaha maskaxda lagu hayo si looga adkaado kala tag
Iska ilaali cidlada
Si aad uga gudubto kala tag, waa waa lama huraan in dhinac la iska dhigo niyad jabka oo loo baxo dibadda. Waa wax aad u wanaagsan in la abaabulo dibedda saaxiibbadaada oo laga codsado inay kugu casuumaan deegaanno cusub, inay iloobaan xusuusta oo ay kaa mashquuliyaan.
Raadi a hobbie inay kugu dhiirigeliso inaad sii wado, waxay noqon kartaa isboorti ama hiwaayad. Muhiimadu waa inaad jeceshahay oo aad dejin karto yoolal yar yar si aad naftaada ugu ilaaliso una dhiirrigeliso.
Ka bixi aaggaaga raaxada
Ku dhiirato inaad sameyso waxyaabo aadan sameyn, sameyso dib-u-habeyn ama u tag baarashuudka. Fikradda ayaa ah inaad naftaada ka dalbato inaad sameyso waxyaabo aadan horay u sameyn jirin, tani waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto marxalad cusub.
Si aad uga gudubto kala tag raadso inaad waqtigaaga geliso wax wax soo saar leh, tusaale ahaan, qaado koorso la xiriirta xirfaddaada. Waxay ku saabsan tahay inaad maskaxdaada ku mashquusho wax kale oo aanad ka qoomamayn. Sidan oo kale, adigoon ogeyn, waxaad sameyn doontaa waxqabad kuu keenaya natiijooyin waqti dheer ah.
Ka fikir qabow
Milicsiga xasilloon ee sababaha dhabta ah ee kala tagga Sidoo kale way caawisaa. Hawshan waa in la sameeyaa in yar ka dib, si ay ugu suurto gasho inay si qabow uga fikirto wanaagga iyo xumaanta xiriirka. Marka waxaad ogaan doontaa in laga yaabo in wax walba aysan aheyn rossy.
Raadi bilow cusub
Wax waliba waxay kudhamaadaan sabab, suurto galnimada jacayl cusub ayaa ku soo dhowaanaya. Hadday dhaafeen dhowr bilood welina waxaad dareemeysaa hoosWaxaa fiican inaad ka waantowdo raadinta lammaane oo aad u tagto takhasusle si uu kaaga caawiyo.
Ilaha sawirka: Horumarka cilmu-nafsiga / Haween badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Talooyin ku saabsan sidii aad uga gudbi lahayd burburka
Fasaxa 2017: Tilmaamaha Qaadista Timaha ee Ugu Dambeeya
Maxay tahay sababaha aad ugu baahan tahay inaad wax u kariso?